के मेलम्चीमा दुर्घटना हुनुमा खानेपानीमन्त्री बीना मगरको दोष छ ? | Safal Khabar
के मेलम्चीमा दुर्घटना हुनुमा खानेपानीमन्त्री बीना मगरको दोष छ ?
बुधबार, ०७ साउन २०७७, १४ : ४८
मेलम्चीको पानी परीक्षणको क्रममा भएको दुर्घटनामा दुई व्यक्तिको मृत्यु भयो र केहि घाइते पनि भए । तर यो घट्ना हुने बित्तिकै यसलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास समेत गरियो । आयोजना निर्माणको क्रममा पूरै आयोजनाको कामको गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाइयो । र, यसको सम्पूर्ण दोषी र जिम्मेवार खानेपानी मन्त्री बिना मगर भएको भनेर केहि मिडियामा समाचारहरु पनि आए ।
घटना हुनुको पछाडिको कारण के थियो ? मेलम्ची जस्ता सुरुङ मार्गका आयोजनामा यस्ताखाले दुर्घटना घट्नु स्वाभाविकै हो रु या यो हुनै नसक्ने घटना भएको हो रु कतिपयले यो खानेपानी मन्त्री बिना मगरले हतार हतारमा आफूले जस लिन पानी परिक्षणको कार्य चाँडो चाँडो गराएको आरोप पनि लगाए । काम ढिला हुँदा किन ढिलो भयो भनेर मन्त्रीमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनु र अर्कोतिर जस लिन हतार हतारमा काम सम्पन्न गर्न लगाएको भन्ने आरोपहरु पनि लगाईनु आफैंमा विरोधाभाष छ ।
खानेपानीको अभावमा बर्षौं बिताएका र वर्षौंदेखि मेलम्चीतिर आफ्नो आँखा सोझ्याएर बसिरहेका राजधानीबासीका लागि मेलम्चीको पानी ल्याउन हतार गर्नु या सम्बन्धित पक्षलाई प्रेसर दिनु के खानीपानी मन्त्रीको अपराध हो रु या त्यसो गर्नु स्वभाविक हो रु सो दुखद दुर्घटनाका कारण अव मेलम्चीको पानी पाउन राजधानीबासीले अरु कति समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हो रु बास्तवमा परिक्षण गरिनु भनेको कमी कमजोरी पत्ता लगाउनका लागि नै हो । ताकि कहि कतै कमजोरी या प्राविधिक त्रुटी पाइयो भने त्यसलाई समयमै समाधान गर्न सकियोस् ।
कसरी भयो दुर्घटना रु
दुर्घटना हुनु र त्यसमा कसैको ज्यान जानु ज्यादै नै दुखद कुरा हो । दुर्घटनाको खास कारण के थियो रु सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको छानविन गरिरहेको छ । र सायद केहि दिनपछि नै त्यसबारेमा सत्य तथ्य बाहिर आउने छ । विज्ञसहितको टिमले छानविन गरिरहेकाले त्यस सम्बन्धमा धेरै टिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन । यो घटनाले आयोजनामा केहि ढिलाई अवश्य भएको छ तर पनि आयोजनाले आफ्नो काम सुचारु नै राखेको छ ।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका इन्जिनियर गोइतको परिवारमा परेको पिडा र क्षतिलाई हामीले त महशुस मात्रै गर्न सक्छौं । तर त्यो अपुरणीय क्षतिले परिवारलाई बहुतै ठूलो पिडामा पारेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको परिवारको पिडामा सम्बन्धित पक्षले मल्हम लगाउने प्रयास गर्न जरुरी छ । र,उनको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपुर्ति या अरु के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नै पर्छ । केही दिन अघि खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमाको रकम उपलब्ध गराउन आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिईसक्नुभएको छ ।
सुरुङ इन्जिनियरहरुका अनुसार सुरुङमा पानीको बहावबाट हुने दुर्घटना, पहाड फुटाउँदा , टनेलभित्रको पानी हटाउँदा , ढुंगा खसेर हुने , प्राविधिक गडबडीको कारण हुने धेरै प्रकारका दुर्घटनाहरु हुन सक्छन् । मेलम्चीको पछिल्लो दुर्घटना भने प्राविधिक गडबडीको क्रममा भएको दुर्घटना मान्नुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । यसो भन्दैमा दुर्घटना हुनु सही भन्ने कुनै पनि दृष्टिकोणसँग सहमत हुन सकिन्न । तर, यो दुर्घटनालाई अनेक राजनीतिक र विविध रंग पोतेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो चाहि पक्कै पनि न्यायोचित नहोला ।
#मेलम्चीमा दुर्घटना #खानेपानीमन्त्री बीना मगर